Onkulunkulu bemonkey bakhulumile kanti uScott Adams ubhala incwadi! | Martech Zone
NgoLwesibili, Okthoba 23, 2007 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Umdwebi wamakhathuni uScott Adams usanda kukhipha incwadi yemibhalo kubhulogi yakhe, Namathela ekudwebeni amahlaya, iMonkey Brain !: Umdwebi wekhathuni Uziba Izeluleko Eziwusizo. Bengilokhu ngifunda ibhulogi kaScott isikhashana impela futhi, kude kakhulu, le ibhulogi ehlekisa kakhulu Ngike ngafunda.
Nayi amazwibela avela kwaScott okuthunyelwe kwakamuva ku-Indian Monkey Attack:
Ngokwe-BBC, amaHindu azinikele acabanga ukuthi izinkawu zingukubonakaliswa kukankulunkulu wezinkawu uHanuman. Ngivumele ngiphume lapha futhi ngivume ukuthi ngingawathayipha amagama athi “unkawu wenkawu” usuku lonke, futhi ukwenza njalo kungenza ngijabule ngaso sonke isikhathi. Ngesizathu esithile esimangalisayo, leyo nhlanganisela yamagama "unkulunkulu wenkawu" idedela isikhwehlela esincane se-serotonin ngqo engxenyeni yobuchopho bami eyithanda kakhulu.
Unkulunkulu wemonkey… unkawu… unkulunkulu wenkawu… Aaaaah, yilokho engikhuluma ngakho? mayelana.
Noma ngubani ochithe impilo ku-cubicle ye-American corporate, ngokungangabazeki uke wabona okungenani umucu owodwa we-Dilbert ukuwenza uzungeze ihhovisi. Ikhono likaScott Adams njengombhali lihambisana namahlaya akhe opopayi, noma kunjalo. Ngicabanga ukuthi lobu ubufakazi bokuthi ikhono nempumelelo akuwona umdlalo wenhlanhla. Okunye engikuthandayo kube lapho abelana ngolimi noma opopayi abangahambanga esigabeni sokuhlola senqubo yokuthumela.
Sikufisela inhlanhla uScott nencwadi yakhe. Ngabe lokhu kuhlangene ngani ne-Marketing Technology? Ngicabanga ukuthi yindaba ephoqayo ukuthi abantu bangashintsha ibhulogi ibe yincwadi. USeth Godin ukwenzile Encane Isikhulu Esisha: kanye ne-183 Other Riffs, Rants, kanye Nemibono Yebhizinisi Emangazayo, UChris Baggott ukwenzile nge Ukumaketha Nge-imeyili Ngezinombolo: Ungalisebenzisa Kanjani Ithuluzi Lokumaketha Elikhulu Kunazo Zonke Emhlabeni Ukuyisa Noma Yiphi Inhlangano Ezingeni Elilandelayo futhi manje uScott uyakwenza nencwadi yakhe.
Ngebhizinisi, ukubhala incwadi kuletha ukuthembeka okuncane. Ukuthi ukubhuloga kungaholela ekubhaleni incwadi kungaba yinto wonke amabhizinisi okufanele acabange ngayo! Ngiyazi ukuthi nginguye!
Ngikhuluma ngezincwadi, ngidlile ku-Amazon namuhla ngazithenga ezimbalwa! Izincwadi ezimbalwa zokumaketha nencwadi ku-Version Control System Subversion zisendleleni.
Tags: udelbertizincwadi zokumakethaonkulunkulu bezinkawuscott adamsuthanda uNkulunkulu